I-China Party Decoration I-Happy Birthday Flag Izibhengezo Zosuku Lokuzalwa I-Garland Banner Manufacture and Factory |SIUMAI
Umhlobiso Wephathi Izibhengezo Zefulegi Losuku Lokuzalwa Olujabulisayo Losuku Lokuzalwa Lwe-Garland Banner
futhi acacise indikimba yeqembu.
I-tapestry yethu yangemuva ingenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.Isibonelo, imidlalo, amamuvi, ezemidlalo, njll. Ama-tapestries enziwe nge-polyester engu-100%.Indwangu inamandla aphezulu, ukumelana nomthelela kanye nokunwebeka okuqinile.Ukugcoba ngokuphindaphindiwe indwangu kungabuyisela ngokushesha isimo sayo sokuqala.Ukunyathelisa kwendwangu kucacile, futhi amaphethini amahle futhi amahle angenziwa ngokwezifiso.
Igama I-Tapestry yosuku lokuzalwa
impahla I-polyester engu-100%.
usayizi 100x70cm; 150x130;200x150 Wonke usayizi ungenziwa ngezifiso
I-MOQ AYIKHO MOQ
Ukuphrinta I-OEM/ODM iyatholakala
Ukulethwa 7-45 izinsuku ukulethwa
Isikhwama se-OPP sizopakisha umkhiqizo, futhi umkhiqizo uhlanganisa amakhadi angu-13 HAPPY BIRTHDAY ngesiNgisi + amaribhoni amahle amade angu-5M anombala ofanayo.
1. Ubuchwepheshe bokuphrinta obuseqophelweni eliphezulu, ukunquma okujwayelekile, okubushelelezi nokungena-burr.
Sebenzisa ubuchwepheshe bakamuva bokucindezela okuzenzakalelayo ukuze ugcine ibhalansi yengcindezi, ukuminyana okufanele, nokushelela.
2. Ububanzi bentambo buhle kakhulu, futhi kusetshenziswa izinto zokusetshenziswa ezisezingeni eliphezulu.
Izinhlobonhlobo zemibala nemibala, umkhiqizo ophelile unombala omuhle nokuguquguquka.Ukuthungwa okuhle, okubushelelezi futhi ukumelana nemibimbi, ukungqubuzana okuqinile.
3. Ikhadi elimhlophe lekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukuqeda isitembu esishisayo.
Khetha amakhadibhodi amhlophe enziwe ngokhuni oluwugqinsi, oluqinile futhi oluhlanzekile lwekhwalithi ephezulu.Inezici zokushelela okuphezulu, ukuqina okuhle, ukubukeka okuhle nokulingana okuhle.Ingaphrintwa futhi ezintweni ezidingwa amakhasimende.
4. Isikhathi sokukhiqiza.
Isikhathi esiqondile sokucubungula noma izidingo zenqubo yangokwezifiso ezisuselwe kumanani athile nezimpawu, ngokuvamile phakathi kwezinsuku eziyi-7-10 zokulethwa.
5. Mayelana nenani.
Intengo yamafulegi enziwe ngokwezifiso izonqunywa ngokuya ngenqubo yokukhiqiza, ukucaciswa kanye nenani, futhi ingase ihluke kancane enanini elivamile.Sizobuyisela wonke amakhasimende ngesilinganiso esihle kakhulu sokusebenza kwentengo.
6. Ifomethi yesithombe.
Ukwenza ngokwezifiso okuvamile kudinga kuphela ukunikeza u-Al.PS.I-CDR namanye amafayela e-vector noma izithombe ezinkulu ze-JPG ezinencazelo ephezulu ukuze abaklami bethu benze ngokwezifiso isitayela esisha.Sizoqinisekisa ngokucophelela futhi sihlole namakhasimende kuso sonke isixhumanisi njengezinto ezibonakalayo, imibhalo yesandla yedizayini, izinkulumo zobuciko, njll.
1. Mayelana nomkhiqizo:
Imikhiqizo esitolo sethu yonke ithathwa ngohlobo.Ngenxa yama-engeli ahlukene wokudubula, amaqoqo okukhanyisa namaqoqo okuphrinta, kungase kube nokuphambuka okuncane kwe-chromatic.Sizothumela amasampula kumakhasimende ngaphambi kokukhiqizwa ngakunye ukuze siqinisekise ukukhishwa kwama-oda ngendlela ephumelela kakhulu.
2. Mayelana nekhwalithi:
Wonke umuntu othengisa oxhumene nekhasimende uzoba nesibopho se-oda kuze kube sekupheleni.Bazohlola ngokucophelela ukukhiqizwa kwe-oda lakho futhi bakunikeze amasampula amakhulu.Ngesikhathi esifanayo, siphinde sihlonyiswe nge-QC yochwepheshe ukuze siqondise isimo sokukhiqizwa kwezimpahla ukuze siqinisekise ukuthi izimpahla ezisezingeni eliphezulu zingalethwa kumakhasimende.
3. Mayelana nokwenza ngokwezifiso:
Iphakheji ye-SIUMAI ifakwe abaklami abahle kakhulu ukusiza amakhasimende enze ngokwezifiso imikhiqizo ayidingayo.Sizokwenza ukudokha okuchwepheshile namakhasimende ngokuya ngezinto zokwakha, imiqondo yokuklama, nokuphothulwa kwedizayini.
4. Mayelana nesevisi yangemuva kokuthengisa:
Uma umkhiqizo unezinkinga zekhwalithi, sizomisa ithimba lokuhlola ikhwalithi elihlanganisa ukuhlolwa kwekhwalithi, ukuthengisa, nabaphathi phakathi namahora angu-24.Ngokuhambisana nenqubo yesinyathelo1: Ukubuyekezwa Kokuqala;isinyathelo2: Uphenyo;Isinyathelo3: Isixazululo, thatha isinyathelo phakathi namahora angu-72 ukuze unikeze amakhasimende izixazululo ezanelisayo.
Okwedlule: Iphathi Setha iphepha Izigqoko Birthday Party Supplies
Olandelayo: Umbala Wokuphrinta Ukupakisha I-Chocolate Tea Storage Paper Tube
Iphathi Yasemuva Imihlobiso Yephathi Impahla Ende ...
Imihlobiso yegceke yosuku lokuzalwa lwesibhengezo sosuku lokuzalwa lwe-Deco...
Umhlobiso kakhisimusi uhlinzeka ngeNkanyezi Yephepha Ezinhlanu P...
Iphathi Setha iphepha Izigqoko Birthday Party Supplies
I-Party Supplies Isibhengezo Sodonga Se-Party Tapestry...